ऐमाले र माओवादी एकीकरण भइरहँदा प्रचण्डलाई डा. बाबुरामको यस्तो प्रश्न – cafeguff
काठमाडौँ । नेकपा ‘एमाले’ र नेकपा ‘माओवादी’ केन्द्रबीच पार्टी एकताको औपचारिक घोषणाका लागि बैठक संयोजन समिति बालुवाटारमा सुरु भएको छ। मदन भण्डारीको २५ औँ स्मृति दिवसको अवसर पारेर एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्ने अन्तिम तयारी गरेका हुन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबिच भएको एक्लाएक्लै वार्तामा भागवण्डा मिलेको हो। यसरी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकिकरण भइरहँदा माओवादी केन्द्रबाट छुटेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई के माओवादी केन्द्र ऐमालेमा विलय भएको हो ? जबजको विरुद्धमा जनयुद्ध गरेकोमा पश्चात्ताप गर्दै ‘मदनपथ’ अङ्गीकार गरेको स्वीकारोक्ति हो ? भनेर प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन् ।
उनले आफ्नोधारणा ट्वीटर मार्फत राख्दै भनेका छन् – ‘नेपाली राजनीतिका अगुवा व्यक्तित्व मदन भण्डारी र अथक अभियन्ता जीवराज आश्रितको २५ औँ स्मृतिदिवसमा हार्दिक श्रद्धासुमन ! आजैका दिन एमाले-माके विलयको घोषणाको कुनै संकेतिक अर्थरुप्रचण्डले जबजको विरुद्धमा जनयुद्ध गरेकोमा पश्चात्ताप गर्दै ‘मदनपथ’ अङ्गीकार गरेको स्वीकारोक्ति होरुप्रष्ट पारियोस् !
म गौरवान्वित भएको छु, मदन भण्डारीको स्मृति दिवसकै दिन हामी एकता गर्दैछौं : प्रचण्ड